RASMI: Xiddigaha u sharraxan abaal-marinta laacibka ugu fiicnaa bisha November Kooxda Manchester United oo lagu dhawaaqay – Gool FM
RASMI: Xiddigaha u sharraxan abaal-marinta laacibka ugu fiicnaa bisha November Kooxda Manchester United oo lagu dhawaaqay
Haaruun November 30, 2019
(Manchester) 30 Nof 2019. Waxaa la shaaciyey ciyaartoyda u sharraxan abaal-marinta laacibka ugu fiicnaa kooxda Manchester United bishan maanta gabagabada ah ee November.
Greenwood, Rashford & Williams ayaa ah saddex laacib ee ku tartami doona abaal-marinta xiddiga ugu bandhigga fiicnaa bisha November kooxda Manchester United.
Kaddib markii ay Manchester United xaqiijisay u soo bixitaankeeda wareegga 32-ka kooxood ee Europa League, isla markaana ay garoonkeeda 3-1 uga adkaatay naadiga Brighton and Hove Albion saddexda ciyaaryahan ee aan kor ku soo sheegnay ayay u soo xulatay kooxdu inay ku tartami doonaan abaal-marinta xiddiga ugu fiicnaa Red Devils bisha November.
Mason Greenwood ayaa shan kulan oo uu saftay bisha November waxa uu dhaliyey labo gool, waxaana da’yarkaan uu dhaliyey gool soo daahay kulankii barbaraha 3-3 ku dhammaaday oo ka dhacay garoonka Bramall Lane, taasoo ka caawisay kooxdiisa inay soo laabasho sameyso kulankaas.
Dhinaca kale Marcus Rashford ayaa isaguna afar kulan oo uu saftay bisha November waxa uu dhaliyey 3 gool, lambarka 10-aad ee Man United ayaana saddex kulan oo xiriir ah goolal ku dhaliyey garoonka Old Trafford.
Da’yarka kale ee Brandon Williams ayaa isaguna 3 kulan oo uu Man Utd u ciyaaray bisha November waxa uu u dhaliyey hal gool, kaddib ganaax uu ku maqnaa kabtan Ashley Young kulankii ay booqanayeen Seagulls, Williams ayaana ku soo bilowday safka hore ee kulan horyaalka Premier League ah markii ugu horreysay, waxaana loo magacaabay xiddigii ugu fiicnaa garoonka kulankaan ee Man Utd.
🏅 Three #MUAcademy products make up our nominees for November’s #MUFC Player of the Month award!
Well done, lads 👏
— Manchester United (@ManUtd) November 29, 2019
RASMI: Xiddiga ku guuleystay Abaal-marinta laacibka bisha November ugu fiicnaa horyaalka Talyaaiga ee Serie A oo la shaaciyey
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Deportivo Alaves Iyo Real Madrid ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey